Qiimaha Tigidhada Xawaaraha Sare ee Ankara Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraQiimaha Tikidhada Isticmaalka Tareenka High Speed ​​Train ee Ankara
14 / 07 / 2014 06 Ankara, 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Qiimaha Tikidhada Tikidhada Istarliyanka ah ee Istanbul Isticmaalka: Maamulka ayaa sii waday waxbarashadooda iyo cilmi baaris ku saabsan qiimaha tareenka xawaaraha sare ee wakhti dheer. Qiimaha tareenka xawaaraha sare ee qofkiiba wuxuu u muuqdaa mid u dhaxeeya 60-90 TL. Sidaa darteed, tareenka cusub ee xawaaraha sare ee qof kasta oo u dhexeeya 70 iyo 80 TL ayaa la filayaa in lagu soo oogo.
Dadka ku lugta leh dhismaha xawaaraha sare ee tareenka waxay sameeyeen daraasado iyo cilmi baaris ku saabsan tareenka tareenka. Saraakiisha, oo sidoo kale xiiseynayay faallooyinka muwaadiniinta, ayaa sameeyay sahan ku saabsan dadweynaha waxayna qabteen cilmi baaris ku saabsan qiimaha, waxay falanqeeyeen natiijooyinka baaritaanyadaas oo ay natiijooyinka sahankani ku soo koobeen xisaabinta.
Raysal wasaaraha dalka Turkey Recep Tayyip Erdoğan ayaa hadda indhaha ku haya in la dhameeyo khadadka tareenka xawaaraha sare leh. Markii Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka, Xiriirka Maraakiibta iyo Isgaadhsiinta Lütfi Elvan uu go'aanka kama dambaysta ah ee mushaharka ku soo qaato, wuxuu marka hore soo bandhigi doonaa shaxdan Ra'iisal Wasaaraha iyo marka Ra'iisal Wasaaraha Erdogan uu ansixiyo khidmaddan, caddadka dhabta ah waxaa lagu dhawaaqi doonaa dadweynaha.
Intaa waxaa dheer, canshuuraha dabacsan ayaa lagu dabaqi doonaa khadka tareenka xawaaraha sare waxaana tikidhada lagu iibin doonaa qiimaha hadda, qiimaha dhimista ayaa la isticmaali doonaa waqtiyada qaarkood.
Qiimaha guryaha ee Sapanca ee wadada Tareenka ee Ankara - Istanbul…
Qiimaha tikidhada kubadda cagta ee Istanbul-Ankara-Istanbul
Qiimaha Tareenka ee Isticmaalka Istanbul
Tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Istanbul
Qiimaha tikidhada kubadda cagta ee Ankara-Istanbul
Qiimaha tikidhada ee Ankara-Istanbul YHT
qiimaha tikidhada sare ee tareenka
Degmada Erzincan waxay sii waddaa wadooyinka loo maro shaqooyinka